VPN Black Friday 2020 - Lacag Gaar ah (La Xaqiijiyay) - Liisaska
Black Friday heshiisyada VPN waxaa loo yaqaanaa inay yihiin waqtiga ugu badan ee sanadka la sugo annaga oo isticmaaleyna VPN. Black Friday heshiisyada VPN waxay naga badbaadinayaan lacag aad u tiro badan oo mudan in la sugo. Haddii aad raadineyso VPN heshiisyada jimcaha madow, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah.VPNs waxay u noqdeen baahi loo qabo isticmaaleyaasha leh bogag sii kordhaya oo laga xannibo ISP-gaaga ama waaxda IT-ga ee goobtaada shaqada.
Dad badan maahan oo kaliya inay isticmaalaan VPNs-ka daalacashada laakiin sidoo kale waxay u isticmaalaan qulqulka, VPN-yada waxay awood u leeyihiin inay furfuraan wax kasta oo ka mid ah mareegta qulqulka. Qaar badan oo ka mid ah dadka jecel Netflix ma rabaan inay si xad dhaaf ah ugu qarashgareeyaan VPNs, iyagu, sidaas darteed, waxay sugaan dalabyada sida BlackFriday VPN heshiisyada iyaga siiya qiimaha ugu fiican ee lacagaha.
Iyada oo ay sii kordheyso tartanka suuqa VPN, waxa ay noqotay mid adag in la doorto tan ugu fiican ee VPN. Adiguba miyaad ka mid tahay kuwa ku jahwareersan VPN kee iibsan oo sugaya heshiisyo qaar?
Ha walwelin, waana ku daboolay. Iyada oo heshiisyadayada TOP 10 Black Friday Friday VPN, waxaad awoodi doontaa inaad si wax ku ool ah u doorato VPN saxda ah adiga oo ku saleysan heshiisyada ay bixiyaan VPN-yada kala duwan ee suuqa.
Si aan kuugu fududeyno, waxaan hoos ku taxnay TOP 10 Black Friday Friday VPN heshiisyada adiga, astaamahooda iyo qiimahooda ayaa lagu daray.
Qiimaha Black Friday Jimcaha (2020)
Sifeynta ugu sareysa
160 + goobood
Qorshaha Bilaha 12
(+ 3 Bilood Bilaash)
49% Qiimo Dhimis + 3 Bisha Dheeraad ah
Hel 49% Off Hadda
Ma jiro wax xog ah oo daadanaya
Qiimaha Qorshaha 2 Sano
+ Diiwaangelin Dheeraad ah
68% Dhimasho + 3 Bilood Bilaash
Qalabka aan xadidnayn
Hanti dhawr madax banaan
Hel 83% Hada
SaafiVV # 4
5 Sano Qorshe Qiime
86% waxay ka dhimantahay Qorshaha 5 Sano
Kordhi 86% Hada
Ilaalinta IP daadinta
Qorshaha 3 Sano
79% Ka Baxsan Qorshe 3 Sano ah
Kordhi 79% Hada
Gaarka ahVPN # 6
Torrenting aan la aqoon
U adeegayaasha 60 Dal
12 Bilaha + 12 Bil Qiimaha Qorshaha Dheeraadka ah
Hel 81% Off Hadda
5 Meelo badan
Amniga Wi-Fi ee Dadweynaha
Ka hel 77% Hada
ExpressVPN waa hogaamiyaha VPN ee suuqa, oo leh astaamo aan caadi ahayn, ExpressVPN shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu doorbida badan ee VPN adeegsadayaasha. Waxay sheeganeysaa inay tahay mid ka mid ah VPN-yada ugu dhaqsaha badan suuqa. Ugu caansan ugudbinta, waa VPN aad u amaan badan oo ku siinaya dhamaan waxaad ubaahantahay qiimaha saxda ah.Iyada oo ExpressVPN Jimcaha Madow heshiis, waxaad keydin kartaa ilaa 49% oo waxaad heli kartaa seddex bilood oo bilaash ah.
Iyada oo leh asturnaanta ugu fiican, ExpressVPN waxay kuu oggolaaneysaa inaad si qarsoodi ah uga baarto internetka. Waxaad kuheleysaa mid ka mid ah adduunka ugu fiican Encryption-ka VPN-kan. Waxay kuugu adeegi doonaan 160 + goobood oo server ah si aad u doorato oo aad si habsami leh u dhex gasho. Inta badan caan ku ah bixinta qulqulka tayada sare leh, Netflix iyo Torrenting waxay noqon doonaan kuwo aad ufiican oo leh ExpressVPN. Ma dareemi doontid wax, waxayna u noqon doontaa sida daalacashada caadiga ah ee isticmaale kasta.
Qiimaha dhabta ah ee u dhexeeya $ 12.95, heshiiska madow ee Jimcaha wuxuu ka bilaabmayaa kaliya $ 6.67. Heshiis kaa badbaadinaya 49%, waxaad bixin doontaa oo keliya $ 99.95 15-ka bilood ee ugu horreeya. Tani waa heshiis waali ah oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu iibsado VPN oo uu ku bilaabo nabadgelyo iyo asturnaan badan.
Heshiiska wuxuu la yimid 30-maalmood oo lacag celin ah sidoo kale. Waxaad ka hubin kartaa boggooda rasmiga ah adoo gujinaya xiriiriyahayaga si aad wax badan uga ogaato siyaasadda lacag-celinta.
Gelinta aan xadidnayn
Surfshark waa muuqaal muuqaal ah, oo waxaad u isticmaali kartaa dhammaan baahiyahaaga dhirta. Heshiiska Surfshark Black Friday waa heshiis kama dambaysta ah oo maskaxdaada qarxin doona. Waxay bixisaa 83% off on heshiiska dhabta ah. Waa mid ka mid ah VPN-yada kaliya ee siiya helitaanka isticmaalka aaladaha aan xadidnayn isku mar. Qaar badan oo ka mid ah tartamayaasheeda ayaa xaddidaya isticmaalka aaladda isku mar illaa 5 ama 10.
Surfshark wuxuu la yimaadaa beddelaad dil wanaagsan, xitaa haddii ay dhacdo inaad xirto barnaamijka adigoon ogeyn, baalashadaada ayaa laga ilaalin doonaa inta lagu jiro. Uma baahnid inaad sii furto tabka VPN si aad uhesho. Waxay raacaan siyaasad adag oo aan diiwaangashanayn, taas oo hubinaysa in aanad raadineynin wax aad baartid. Waxay ku bixiyaan dhammaan astaamahan qiimo aad u hooseeya.
Heshiisyada jimcaha ee loo yaqaan 'Surf shark black Friday' ayaa na siinaya qiimo weyn oo ah $ 1,99 bishiiba. Qiimaha dhabta ah ee VPN waa $ 11,95 bishii, tanina waa heshiis weyn oo aan qofna rabin inuu seego. Waxaad keydin doontaa qiyaastii $ 240 markaad ka iibsaneyso qorshaha 2-sano Surfshark. Qaybta ugu fiican ayaa ah in heshiiskan si buuxda loogu soo celin karo 30 maalmood gudahood haddii aadan ku faraxsanayn VPN.
IPvanish waa VPN kale oo suuqa ku koraya. Waxay bixisaa ah interface user fiican iyo asturnaanta in dadka isticmaala ay. Iyada oo ay feature chat live, waxaad had iyo jeer si xor ah u diri kartaa iyaga qoraal haddii ay jiraan wax weydiimo ama arrimo kasta. Marka loo barbardhigo VPN-yada kale, waxaa lagu qiimeeyaa qiime aad uga hooseeya, inta badan shaqsiyaadka isticmaala. Haddii aad raadineysid xiriir guri ama ujeedo shaqo, VPN-kan ayaa si sax ah loo qiimeeyay si loo fuliyo baahiyahaaga.
IPvanish wuxuu ku siinayaa dhammaan astaamaha qabow qiimo aad u jaban, waadna ka faa iidaysan kartaa sida ugu wanaagsan ee barnaamijkan. Qiimaha VPN-kan waa mid weyn. Heshiiska madow ee jimcaha ee adiga lagugu qiimeeyay waa $ 6.49 bishii oo u dhiganta $ 77.99 sanadkii; si kastaba ha noqotee, heshiiska la'aan, qorshuhu wuxuu ku kici lahaa $ 143.88 sanadkiiba. Waxaad ku keydin doontaa ilaa 46% heshiiskan jimcaha madow.
Waxaad ka hubin kartaa boggooda rasmiga ah adoo gujinaya xiriiriyahayaga si aad wax badan uga ogaato siyaasaddooda lacag-soo-celinta.
30 maalmood dammaanad lacag-celin ah
Taageero macaamiil oo weyn
256-waxoogaa sir ah AES
Kaydinta Sugarsync oo sir ah
4. Gaashaanka Hotspot
Mid ka mid ah hormuudka VPN-yada muddo toban sano ka badan, Hotspot gaashaan, wuxuu ahaa VPN weyn marka ay timaado asturnaanta iyo amniga. Si aad ah ayaa looga dhex yaqaan dadka isticmaala oo leh saldhig macaamiil oo adag.
They suuqooda si aan caadi aheyn sifiican, waxayna si sharaf leh u sheeganayaan inay yihiin # 1 VPN. Si ka duwan inta badan tartamayaasheeda, waxay bixiyaan dammaanad-celin 45-maalmood oo lacag-celin ah oo ka badan 30-maalmood oo dammaanad-celin lacageed ah. Waxaad helaysaa taageero macaamiil heer sare ah 24/7 oo marin u ah in ka badan 115 goobood. Waxaad ku isticmaali kartaa gaashaan kulkulul ilaa 5 aaladood hal mar.
Qiimeynta gaashaanka Hotspot si sax ah ayaa loo sameeyaa, heshiiska madow ee Jimcaha, waxaad ka iibsan kartaa gaashaanka kulkulul VPN kaliya $ 2.99 bishiiba. Qorshaha billaha ah waxaa lagu qiimeeyaa $ 12.99, laakiin heshiiskan, waxaad ku dalban kartaa kaliya $ 2.99, adiga oo ku siinaya keyd dhan 77%.
Ilaa 5 qalab marin looga heli karo
NordVPN waa VPN aad u ammaan badan oo xaddidan oo raacaya siyaasad adag oo aan qorin. Waxaa jira in kabadan 20 astaamaha NordVPN, waana mid kamid ah xulashooyinka kuugufiican adiga. Iyadoo la adeegsanayo is-dhexgal aad u saaxiibtinimo leh, waxaad ku bilaabi kartaa NordVPN si habsami leh.
VPN kaa siinaya dhamaan astaamaha aad rabto, waxaad ku heli kartaa VPNkan kaliya $ 3.71 bishiiba muddo labo sano ah. Qiimaha dhabta ah ee VPN waa $ 11.95 bishiiba, laakiin heshiiska Black Friday wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sheegato qiimo dhimis ah 70%.
Waa barnaamij aad ufiican oo loogu talagalay qulqulka, markaa haddii maalin kasta dhacdo, waxaad kaliya u baahan tahay VPN ujeeddooyin ujeeddooyin, waad ogtahay inay taasi tahay barnaamijka kuugu habboon. Netflix iyo Torrent waxay si dhakhso leh ugu taageeraan xawaaraha sare VPN.
Lix adeegsi qalab
Helitaanka qulqulka adduunka oo dhan
Cyberghost waa VPN kale oo leh qiimeyn 5-xidig ah oo ay adeegsadaan dadka waaweyn ee isticmaala VPN. Waxay siisaa asturnaan aad u ballaadhan waxayna taageertaa xannibaadda xayeysiinta si ay kuu oggolaato inaad u daalacato oo aad si habsami leh u socoto. Oo ay la socdaan Hotspot Shield, waa mid ka mid ah kuwa yar ee VPN ee bixiya dammaanad lacag-celin ah.
CyberGhost waa hormuud VPN ah oo ku siinaya dhammaan astaamaha kor ku xusan wax badan oo qiimo weyn leh. Qaybta ugu fiican ayaa ah, heshiisyada Jimcaha Madow, wax badan ayaad badbaadin kartaa. Uma baahnid inaad ka walwasho helitaanka qalabkan. Waxaa si fudud looga heli karaa dhammaan barnaamijyada iyo aaladaha sida macruufka, macOS, Android, Windows, Firetv, chrome, Firefox, iyo waxyaabo kaloo badan.
Qiimahoodu wuxuu ka bilaabmaa $ 12.99 bishiiba, laakiin heshiiska madow ee Jimcaha, waxaad ku heli kartaa kaliya $ 2/75 bishiiba. Tani waxay kaa badbaadinaysaa 82%, kaliya maahan astaamaha ay bixiso, waana VPN weyn.
45 maalmood dammaanad lacageed
Majiraan siyaasad diiwaan ah
7. Gaar loo leeyahayVPN
PrivateVPN waxay siineysaa heshiis weyn isticmaaleyaasheeda, waadna ka nixi doontaa markaad ogaato in Jimcadan Madow, waxaad dalban kartaa 12 bilood oo bilaash ah adoo iibsanaya PrivateVPN bilaha 12. Iyada oo laga heli karo dhammaan meheradaha waaweyn, waxay na siinaysaa xawaaraha ugu fiican ee lagu daalacdo laguna qulqulo.
PrivateVPN waxay ku bixisaa intaas oo dhan kaliya 50% qiimaheeda dhabta ah, waxaad bixinaysaa sanad waxaadna u adeegsaneysaa labo. Muxuu yahay heshiis waali ah oo toos ah oo loogu talagalay dadka isticmaala. Qiimaha saxda ah wuxuu u dhexeeyaa $ 7.12 bishiiba. Heshiiska madow ee jimcaha ee loo yaqaan 'PrivateVPN' wuxuu ka bilaabmaa $ 1.89 bishiiba laba sano. Taasi waxay noqonaysaa wadar ahaan $ 45.36 si aad u isticmaasho VPN muddo laba sano ah - heshiis aad u fiican oo ku saabsan qiimaha xirmooyinka oo ku siinaya dammaanad lacageed oo 30-maalmood ah.
6 Xidhiidh isku mar ah
Siyaasadda Gelitaanka Xogta ee ZERO
Servers 60 Dal
PureVPN waa aalad qiimo sare leh oo VPN ah oo ay adeegsadaan dadka isticmaala adduunka oo dhan, waxayna bixiyaan in ka badan 2000 + goobo adeeg oo dalal kala duwan ah. Waxay ka fureysaa ku dhowaad dhammaan goobaha qulqulka ee isticmaalkaaga waxayna ku siinaysaa xawaare wanaagsan sidoo kale. PureVPN waxay dhowaan, 2016, cusbooneysiisay siyaasadeeda asturnaanta si aan loo qorin wax diiwaan gashan oo ay u oggolaato adeegsadayaasheeda inay si xor ah u baaraan xiisadda.
PureVPN wuxuu ku siinayaa heshiis weyn oo jimce ah, waxaadna iibsan kartaa qorshe seddex sano ah adoo mid ka bixinaya arrintan. Siciradooda dhabta ah waxay ka bilowdaan $ 10.95, laakiin heshiiska Black Friday waxaa lagu qiimeeyaa kaliya $ 3.33 bishiiba. 70% dhimis ah 31-maalmood oo dammaanad-celin lacageed ah waa heshiis aad rabto inaad hesho.
P2P Waa karti
24-saac taageero sheekeysi toos ah
Ivacy VPN waa iswaafajin ugu sareysa VPN oo ku siineysa dhamaan astaamaha hal mid VPNadoo leh difaac aad ufiican iyo khibrad socodsiin aan la rumaysan karin, waxayna heleen dhamaan waxaad ubaahantahay VPN.Diiradooda koowaad waxay had iyo jeer siinayeen nabadgelyada dadka isticmaala; si wanaagsan ayey u gaareen.
Ivacy VPN waxay bixisaa waxyaabo badan oo kale. Waxay haystaan ​​maxkamad bilaash ah oo 7 maalmood ah oo waliba aad ka dalban karto degelkooda rasmiga ah. Qiimaha IvacyVPN wuxuu ka bilaabmayaa $ 9.95 bishiiba. Si kastaba ha noqotee, qiimaha la dhimay waa $ 1.16 bishiiba. Soo bixitaanka tp $ 70 sanadkii, waxaad ku badbaadinaysaa 88% heshiiskan. Waxay ku siinayaan gunno toban qalab oo soo gelitaan qalab ah, waxaadna si xor ah ugu isticmaali kartaa tan isku mar qalab kala duwan.
Xulista Ujeedada Smart
256-Waxoogaa sir ah
VPN kale oo weyn, waxaad ka heli doontaa VPN-kan oo si fudud looga heli karo guud ahaan meheradaha waaweyn. Proton VPN wuxuu sheeganayaa inuu leeyahay astaamo amni oo dheeri ah wixii VPN caadi ah, tanina waa VPN oo siineysa doorbidid dheeraad ah xagga badbaadada isticmaalaha oo bixisa astaamo macaan. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin astaamo aad u fiican sidoo kale.
Marka laga reebo astaamaha aan horay u soo sheegnay, waxay bixiyaan dammaanad lacageed oo 30-maalmood ah iyo waliba adeegsadayaasheeda. ProtonVPN waa VPN xawaare sare leh, hubaal waadna iska hubin kartaa wax intaa ka badan.
Qiimahoodu waa mid gaar ah, qorshahooda aasaasiga ahna wuxuu ka bilaabmaa $ 3.29 bishiiba. Si kastaba ha noqotee, qorshaha labada sano ah wuxuu kuu badbaadin doonaa $ 241 maaddaama lagu qiimeeyo kaliya $ 479. Waxaad heleysaa dhammaan astaamaha aan xadidnayn ee leh helitaanka illaa 10 aalado isku mar.
Isdhexgalka casriga ah
Ilaa 10 Qalabka
Ka Hortagga Daadinta DNS
Majiro Siyaasad Guji
Hab maamuusyo adag
Muuqaal Muhiim ah oo La Fiirinayo Intaad Iibsanayso VPN-yada Wax-qabadka Jimcaha Madow:
Iibsashada VPN waxay u noqon kartaa maalgashi yar shirkadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka maalin walba u adeegsada, si kastaba ha noqotee, websaydhkayaga, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ogtahay waxa ay tahay inaad ka fili karto VPN ee aad iibsanayso.
Waa inaad marwalba hubisaa in VPN aad iibsaneysaa ay raacayso siyaasad liidata oo dhameystiran. Qaar badan oo ka mid ah VPN-yada ku jira suuqa waxsoosaarka naftooda ayaa ah siyaasad aan diiwaangashanayn VPN, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa dayactira diiwaanada. Iyada oo VPN ah oo aan hayn diiwaanada, waad baari kartaa iyada oo aan walwal laga qabin in lagu raad joogo.
Qaar badan oo ka mid ah VPN-yada ayaa leh sirta AES 256, taas oo hadda ah mid aad u wanaagsan oo la aasaasay oo sir ah oo loo adeegsado VPN. Raadi nooca sirta kahor intaadan iibsan VPN.
Xawaaruhu waa u waajib qof kasta, oo qofna ma jecla dib u dhac ama gaabis biraawsar. VPN waa inuu noqdaa mid xitaa marka aad daalacanaysid oo aad socotid, waa inaadan dareemin dhimista xawaaraha. Xawaaruhu waa inuu noqdaa mid aadan dareemin joogitaanka VPN. Si kastaba ha noqotee, xawaaraha badanaa wuxuu kuxiran yahay server-yada sidoo kale.
Nabadgelyadu waa arrin muhiim ah, waana inaad hubisaa in VPN-gaagu ku siinayo badbaado guud, wuxuu ku siinayaa cinwaan cusub oo IP ah, wuxuuna kugu daboolayaa cinwaankaagii hore ee IP-ga.
Isku xirka isticmaalaha
Qofna ma jecla inuu maro nidaam iyo talaabooyin badan oo lagu bilaabayo VPN, VPN waa inuu ahaadaa mid fudud, oo leh leexin dil, shid, oo kaliya sii wad shaqada iyadoo aan wax walwal ah laga qabin, waa inay si fudud u adeegsadaan dadka isticmaala. .
VPN kasta waa inuu si weyn diirada u saaraa sidii uu taageero weyn u siin lahaa adeegsadayaashooda; qaar badan oo ka mid ah VPN-yada ayaa leh wada sheekeysi toos ah, halka in yar oo ka mid ah aysan lahayn. Waa inaad doorataa VPN kaa taageeraya qaladaadka isla markaana si deg deg ah uga jawaaba su'aalaha.
Intaad maalgelinayso qaddar macquul ah, qofku had iyo jeer wuxuu jeclaan lahaa inuu helo VPN taageera qalabyo badan. Markay tahay VPN, qaar iyaga ka mid ah waxay dib ugu celiyaan ilaa 5 aalad, halka qaarna ay taageeraan toddobo iyo qaarna 10. Iyadoo lagu saleynayo baahidaada, go’aanka si taxaddar leh u qaad inta qalab ee isku mar aad rabto inaad isticmaasho VPN.
Meelaha waaweyn ayaa taageera
Markaad iibsaneyso VPN isticmaalka aaladaha kala duwan, waa inaad hubisaa in VPN uu taageerayo meherado muhiim ah. Qaar ka mid ah VPN-yada ayaa laga yaabaa inaan laga heli karin macruufka, halka qaarkood laga yaabo inay leeyihiin kaliya nooca PC-ga. Maskaxda ku hay maareynta kala duwan ee aad haysato oo aad u baahan doonto VPN ka hor intaadan iibsan.
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa iibsada qorshooyin sanadle ah ka dibna waxay dalbadaan in dib looga soo celiyo dammaanadda lacag celinta. Tan waxaa lagu dhex dari karaa ujeedooyin tijaabin iyo in kaliya loo isticmaalo barnaamijka muddo bil ah bilaash. Waa inaad hubisaa inaad iibsato qorshe VPN ah oo kuu oggolaanaya inaad haysato dammaanad lacag-celin ah. Intooda badan VPN waxay bixiyaan dammaanad-celin 30-maalmood ah; hase yeeshe, waxoogaa VPN ah ayaa bixiya dammaanad-celin 45-maalmood ah.
Fursadaha adeegaha waa lama huraan. Qaar badan oo VPNs ah ayaa siiya kumanaan server si ay ugu adeegsadaan adeegsadayaashooda, waana inaad hubisaa inaad haysato VPN oo leh server badan oo dalal badan ah. Sidan, waad tijaabin kartaa oo aad ku ogaan kartaa serverkee dhakhso leh iyo serverkee ku siinaya natiijooyinka ugu fiican.
1Q. Miyaan ku heli karaa dammaanad lacag-celin ah oo ku saabsan iibsiga heshiiska Jimcaha madow?
Sanadaha:Haddii VPN aad iibsatay ku siinayo dammaanad-celin lacag-celin ah, shaki la'aan waad dalban kartaa. Ka hubi boggaga rasmiga ah ee rasmiga ah ee loo yaqaan 'VPNs' wixii macluumaad dheeraad ah.
2Q. Waa kuwee heshiisyada kale ee ay VPNs bixiyaan oo aan ahayn jimcaha madow?
Sanadaha:Lacagaha ayaa ka soo baxaya websaydhada rasmiga ah ee VPNs, si kastaba ha noqotee, marka laga reebo Black Friday, iyo heshiisyada muhiimka ahi waxay soo baxaan Cyber ​​Monday iyo inta lagu jiro Sannadaha Cusub '.
Black Friday VPN Heshiisyada ayaa si naxdin leh u cabsi badan. Waa inaad weli ka fekereysaa dhammaan xulashooyinkaan, kuwaas oo VPN la doorto. Dhammaantood way iska fiican yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxaan shakhsi ahaan kugula talin lahayn ExpressVPN sababtoo ah astaamaha waaweyn iyo xawaaraha.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku siin karno heshiisyadii ugu fiicnaa ee kaa farxiyay ee kaa badbaadiyay lacagta. Si aad waxbadan uga ogaato VPN heshiisyada jimcaha madow, ka faallo khaanaddayada sheekaysiga ee hoose. Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno ra'yi-celin iyo sidoo kale inaan tixgelinno soo-jeedimahaaga qiimaha badan ee ku jira sanduuqa sheekaysiga.
VPN ugu fiican ee loogu talagalay FireStick (2020)
FMovies - Ma daawan karnaa Filimaan ku saabsan tan?
Youtube ma hoos ayuu u socdaa? Hubi Xaaladda Live Hadda
live tv yaa ugufiican
movies download hd for free
dabka oo bilaash ah oo loogu talagalay pc
dami raadinta nabdoon ee tumblr
hulu lagu daray bogga login aamin